Amazon inobhejera pane yakavhurwa sosi kukwikwidzana nemubatsiri weGoogle mumotokari | Linux Vakapindwa muropa
Amazon inobheja zvakare pane yakavhurwa sosi, ino nguva ichiitora kukwikwidza nenzira yemakwikwi neGoogle mubatsiri wemotokari. Isu takataurawo nezveMotokari Giredhi Linux (AGL) muLxA, uye kana iwe uchirangarira iwo ruzivo, ichi chikuru chirongwa cheLinux chemotokari dzakabatana umo injini yekutsvaga inofarira kuvepo mumotokari, uye ikozvino Amazon iri zvakare kufarira mairi.
Amazon inoda kukwikwidza neGoogle uye iwe unoda wako Alexa izwi mubatsiri uye izwi kuzivikanwa system kuti iite AGL inoenderana. Iyi mhando yeAI masystem ari kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo uye ari kuitwa mumabhizinesi, mudzimba uye ikozvino zvakare mukutakura kuti tichinje mararamiro atinorarama kusvika zvino. Uye Amazon haidi kusiiwa kumashure, saka ichaisa Alexa kukwikwidza mumusika urikutongwa neGoogle Android Auto neApple Car Play ...
AGL kutanga mu 2018 paToyota Camry kekutanga, uye ichave yakasarudzika, yakavhurika, uye isingashande nzira kune Android Auto uye iOS Car Play. Ipo Amazon iri kushanda neNuance Communications Inc. uye Voicebox Technologies Corp kunyora kodhi inoita kuti zvishandiso zveAGL zviwirirane neakasiyana matekinoroji eA Alexa, izvi zvichabvisa kudikanwa kwevagadziri kuita shanduro zhinji dze software yavo.
Uye iyo Linux Foundation AGL chirongwa uye nerubatsiro rwe Amazon ine Alexa, inogona kubhadhara, sevazhinji vagadziri vemotokari vari kuyedza kusimuka votsvaga dzimwe nzira kune mamwe akavharwa masisitimu eAuto Auto neCar Play. Naizvozvo kwaizove kukunda kwehofori yaJeff Bezos. Parizvino AGL ine uye inotsigirwa neJaguar Land Rover, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mercedez-Benz, Mazda, Subaru, nevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Amazon inobhejera pane yakavhurwa sosi kukwikwidzana neGoogle mubatsiri mumotokari
Ndokumbirawo mugadzirise izwi rekuti "verions" mundima yechitatu kumagumo
Videogames ... raira tambo yako BASH